Nezahualcoyotl ၏ 30 စာပိုဒ်တိုများ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Nezahualcoyotl ဆိုတာဘယ်သူလဲသိလား နာမတော်သည်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်မဟုတ်၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ယနေ့သူ၏ဝါကျများကိုသင်ဖတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သိသည်မှာသင်အတွင်း၌တစ်ခုခုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲသွားသည်ဟုသင်ခံစားရလိမ့်မည်။ သူ့ကိုကဗျာဆရာအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ သူသည်ယနေ့မက္ကဆီကိုပြည်နယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော Texcoco ကို (tlatoani) အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်ထိုအချိန်ကဗိသုကာပညာရှင်၊ စစ်သည်တော်နှင့်ပညာရှင်ဖြစ်ပြီးသူ၏မိခင်ဘာသာစကားမှာနာဝါးလ်စကားဖြစ်သည်။ သူသည် Texcoco တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၄၀၂ ခုနှစ်တွင် ၁၄၇၂ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူ၏ထင်မြင်ချက်များသည်ယနေ့အထိမည်မျှအရေးပါသည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူသည်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူသိများသည်။
သူသည်မင်းသား Matlalcihuatzin ၏သားဖြစ်ပြီး Azuits ဘုရင်Huitzilíhuitl၏သမီးဖြစ်ပြီးTenochtitlán၏ဒုတိယဆရာဖြစ်သည်။ နှင့်Ixtlilxóchitlမှ Chichimecas ၏ဆဌမမာစတာနှင့် Texcoco ၏မာစတာ။ သူမွေးဖွားချိန်တွင်သူ့ကို Acolmiztli (Strong Puma) ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ခံစားခဲ့ရသောဝမ်းနည်းဖွယ်အခြေအနေများကြောင့်သူ့ကိုသူ၏နာမည်အားNezahualcóyotl (Hungry Coyote) ဟုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
အသက် ၁၆ နှစ်တွင်သူသည်တက်ပန်နက်ကန်ကျူးကျော်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်၊ သူတို့ကဖခင်နှင့်မိသားစုတစ်စုလုံးကိုရာဇပလ္လင်နှင့်အတူနေလို။ သတ်ပစ်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။ Nezahualcoyotl ၏ဖခင်သည်အခြားမျိုးနွယ်စုများ၏ထောက်ခံမှုကိုမတွေ့မှီထွက်ပြေးရန်ပိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။
နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများနှင့်သေဆုံးမှုများစွာပြီးနောက်သူသည်မက္ကစီကိုတွင်ခမ်းနားထည်ဝါသောအချိန်တစ်ခု ဖန်တီး၍ သူတို့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့သည့်အာဏာရှင်စနစ်အားလုံးကိုအဆုံးသတ်လိုခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောဘဝပြီးနောက် သူ၏နှလုံးသားထဲမှထွက်လာသည့်စကားလုံးများကိုစက္ကူနှင့်ကလောင်အမည်များဖြင့်ဖမ်းယူလိုက်သည်မှာမနည်းပါ။
နှစ်ပေါင်းရာချီကုန်လွန်သွားပေမဲ့၊ မင်းတို့ဟာသူတို့ကိုစာဖတ်ရတာပျော်စရာကောင်းတယ်၊ အဲဒါတွေကိုမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘ ၀ မှာအသုံးချနိုင်ရင် ... မင်းတို့ဟာပညာရှိတဲ့စကားစုတွေပါ။ အချို့သောစကားစုအချို့သည်၎င်းတို့သည်အချိန်ကာလ၏ဖြစ်ကြောင်းသိသာသော်လည်း၎င်းသည် ပို၍ ပင်ကျက်သရေရှိစေသည်။
ငါ့နှလုံးဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ။ အချည်းနှီးအသက်ရှင်။ ၊
ငှက်ကအဲဒီမှာလမ်းလျှောက်တယ်၊ စကားများနေတယ်၊ ​​သီချင်းဆိုတယ်၊ ဒါကဘုရားသခင့်အိမ်တော်ကိုကြည့်ဖို့ပဲ။ ငါတို့ပန်းများနှင့်သာ။
ငါဝမ်းနည်းဝမ်းနည်းဖြစ်လာကြသည်။ သင်သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်တည်ရှိသည့်ဒေသတွင်ဤအရပ်၌မရှိတော့ပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာလှဲခြင်းငှါ၎င်း၊ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြီးငွေ့ခဲ့တယ်။
ပန်းလှလှလေးဟာပန်းပွင့်တွေပေါ်မှာသီဆိုနေတယ်။ သီချင်းရဲ့ရေထဲမှာလည်းပေါ်နေသည်။ အမျိုးမျိုးသောအနီရောင်ငှက်များကသူ့ကိုတုံ့ပြန်ကြသည်။ လှပသောအနီရောင်ငှက်သည်လှလှပပသီဆိုသည်။
ငါသူတို့ရဲ့ကျောက်စရစ်ခဲတွေ၊ နေရာတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေ၊ လင်းယုန်တွေနဲ့ကျားတွေကိုကြည့်ပြီးကျောက်စိမ်း၊
သူတို့သည်တစ်ဖန်ပြန်လာကြ ဦး မည်လော။ တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာပေါ်၌တစ်ကြိမ်သာပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည်။
သငျသညျကျောက်စိမ်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့ရင်တောင်, သင်အဲဒီမှာသွားလျှင်ပင်, ဇာတိပကတိအရပျ။ ငါတို့ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ် အဘယ်သူမျှမကျန်ကြွင်းရ။
ငါတို့သခင်ဘုရားသည်အရပ်ရပ်တို့၌ကျိန်းဝပ်တော်မူ။ ၊ သူသည်ဘုန်းတော်၊ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ကျော်ကြားမှုကိုရှာသည်။ သူသည်အရာရာကိုတီထွင်သည်၊ သူ့ကိုယ်သူတီထွင်သည်။
မှန်သည် (အရင်းအမြစ်ရှိသည်) ဟုသူတို့ပြောကြသည်မှာ၎င်းသည်အမြစ်မရှိဟုပြောကြသည်။
အကြမ်းဖက်မှုမရှိဘဲ၎င်း၏စာအုပ်များနှင့်ပန်းချီကားများအလယ်တွင်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာသည့် Tenochtitlan မြို့သည်။
လူတွေဘေးမှာဘယ်လိုနေရမလဲ။ သူမဆင်မခြင်ပြုမူပြုမူခြင်း၊ အသက်ရှင်နေထိုင်ပါသလား၊ လူကိုထောက်မ။ ချီးမြှောက်ခြင်းခံရသောသူလော။
ငါဘယ်တော့မှမသေဘူး၊ သေခြင်းမရှိသောနေရာ၊ သူမအောင်နိုင်သည့်နေရာ၊ ထိုတွင်ကျွန်ုပ်သွားခွင့်ပြုပါ။
၎င်းသည်ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်၊ လည်ဆွဲကောင်းကဲ့သို့၊ quetzal ၏ကျယ်ပြန့်သောအမွေးအတောင်ကဲ့သို့ပြုလုပ်သကဲ့သို့သင်၏စစ်မှန်သောသီချင်းကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားသည်။ ၎င်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်သည်။
မင်းကိုပန်းတွေနဲ့ရေး၊ ရောင်စုံသီချင်းများ၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိသူများအတွက်ရိပ်ရတဲ့သီချင်းများနှင့်အတူ။
သင်၏ကိုကိုးကိုယူပါ၊ ကခုန်ကြပါစို့, သီချင်းများ၏တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးစတင်! ဒီဟာငါတို့အိမ်မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ဒီမှာနေမှာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားခဲ့ရမယ်။
ကောင်းကင်အတွင်း၌သင်သည်သင်၏ဒီဇိုင်းကိုဖောက်လုပ်။ မင်းတို့နင့်ကိုအစာကျွေးနေပြီလား၊ မင်းရဲ့ကျော်ကြားမှုနဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာဖုံးကွယ်ထားသလား။ မင်းဘာအမိန့်ထုတ်
ငါမြေကြီးပေါ်မှာရပ်ရမည်လော။ ငါ့ကြမ္မာကဘာလဲ? ငါဟာဆင်းရဲနွမ်းပါးနေတယ်။ ငါ့နှလုံးသားကဒုက္ခရောက်နေတယ်။ မင်းကကမ္ဘာပေါ်မှာငါ့သူငယ်ချင်းပဲ။
ငါဘယ်လိုသွားရမလဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာမှမကျန်တော့မှာလား။ ငါ့နှလုံးဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ။ အချည်းနှီးအသက်ရှင်။ ၊ အနည်းဆုံးပန်းတွေထားခဲ့ရအောင် အနည်းဆုံးသီချင်းတွေထားခဲ့ရအောင်။
သင်မှန်လားအမြစ်ရှိသလား။ ခပ်သိမ်းသောအရာကိုဖုံးအုပ်တတ်၏။ ဒီလက်ျာဘက်? သူတို့ပြောသလိုမဟုတ်ဘူးလား။ ငါတို့၏စိတ်နှလုံးသည်ညှဉ်းဆဲခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏။
ငါကNezahualcóyotlပဲ၊ ငါကအဆိုတော်တစ်ယောက်၊ ကြက်တူရွေးကြီးတစ်ကောင်ပါ။ သင်၏ပန်းများနှင့်ပန်ကာများကိုယခုယူပါ။
အဲဒီမှာတစ်နည်းနည်းနဲ့ကတည်ရှိဘယ်မှာရှိ။ မင်းသားလေးတွေကိုငါတို့ပန်းတွေဆောင်ခဲ့မယ်၊ အကယ်၍ သာလျှင်ကျွန်ုပ်သည် Tezozomoctzin ၏လှပသောသီချင်းများကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေနိုင်မည်လား။ သင့်နာမည်ဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး
သေခြင်းတရားမရှိတဲ့နေရာဘယ်သွားမလို့လဲ။ ထိုမျှမကငါသည်ငို။ နေလိမ့်မည်လော။ သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုဖြောင့်စေကြလော့။
အဖိုးတန်သောဖြစ်ရပ်မှန်များကမိုးရွာစေသည်။ သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုသင့်ဘဝမှပေးသည်။ ကြည်လင်သောပန်းများ၊ အဖိုးတန်ပန်းများ၊ သူတို့ကိုငါတောင့်တခဲ့သည်၊
ငါ့ပန်းတွေမကုန်တော့ဘူး၊ ငါ့သီချင်းတွေလည်းမရပ်နိုင်ဘူး။ ငါသီချင်းဆို၊ ထတယ်၊ ဖြန့်တယ်၊ ဖြန့်တယ်။ ပန်းများညှိုးနွမ်းသွားပြီးအဝါရောင်ပင်ဖြစ်သည့်တိုင်ရွှေအမွေးများနှင့်ငှက်အိမ်၏အတွင်း၌သယ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။
သင်၏သနားခြင်းကရုဏာစိတ်ကိုတိုးပွားစေတော်မူပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းမင်းကိုသတ်ချင်တာလား ငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြပြီ။ ငါတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာနေတတ်ကြ၏။
ကံကြမ္မာလားဒါမှမဟုတ်အခွင့်အရေးလား။ ၄ င်းကိုသင်စဉ်းစားစေမည့်စကားစု ၄၀
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » Nezahualcoyotl ၏ 30 စာပိုဒ်တိုများ